> Resource > QuickTime > QuickTime Rotator: Sida loo shaandheyn Videos QuickTime
Maalmahan dadka sida videos la taleefannada gacanta ay ka badan qaadi karo video kaamirada toogtay. Laakiin mararka qaarkood ka clips video laga yaabaa in lagu vertical toogtay, si ay u eegto qalaad markii ay ciyaareen tan iyo markii ay computer ma tahay in booska siman caadiga ah la filayo in ay daawadayaasha. Si aad u hesho video qumman, oo aad u baahan tahay inaad isku shaandheyn. In kastoo aad u cusboonaynta kartaa ciyaaryahan QuickTime in ay version pro inay isku shaandheyn, habkan u muuqataa in ay adag waxoogaa yar. Halkan waxaan ku talinaynaa QuickTime wax ku ool ah rotator- Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si ay kaaga caawiyaan in aad isku shaandheyn QuickTime videos fudud. Hadda raac tilmaan-hoose si aad u aragto sida ay u shaqayso.
Si aad isku shaandheyn file QuickTime, marka hore waa in aad u soo dhoofsadaan barnaamijka adigoo riixaya "Import" button on daaqadaha hoose. Tani rotator QuickTime sidoo kale shaqo jiitaa-n-dhibic, si aad sidoo kale si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi files ka File Explorer si User ee Album.
2 beddesha QuickTime File
Ka dib markii in, jiidi file QuickTime ka User ee Album in track video on Timeline ah. Markaas double u riix si aad u furato guddi tafatir ah. Tiirka video ah, waxaa jira 4 badhamada beddesha. Hawlaha ay ku qoran yihiin hoos:
Wareeji 90 darajo u socoto. Iyaga Riix dhowr jeer si aad isku shaandheyn karaa video 180 digrii, 270 darajo oo isku shaandheyn ku laabto booska asalka ah.
Wareeji 90 darajo anticlockwise. La mid ah si ay u button hore ee anti - jihada.
Flip file QuickTime gudban, yeellay.
Flip file QuickTime vertical, bidix ilaa midig.
Riix linkiga u dhigma in isku shaandheyn file QuickTime aad. Waxaad ka arki kartaa natiijo-waqtiga dhabta ah ee suuqa kala Falanqeynta ah.
3 dhoofinta File wareejiyo QuickTime
Ka dib markii qoqobada file QuickTime, riix "Abuur" button u badbaadin. Waxaad sidoo kale ku badbaadin karaan qaab asalka ama bedesho qaab kale sida AVI, wmv, FLV, MPEG, iwm ee "Qaabka" tab. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari file cusub ee qalabka sida iPhone, iPad iyo iPod, u tag "Device" tab iyo doorasho qalab ka mid ah liiska. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo si toos ah aad gali kartaa qumman videos in YouTube ama DVD gubi in cajalladaha loogu daawashada TV-ga.
Oo sidaas daraaddeed waa quruxsan fudud, haa? Haddii aad rabto inaad wax badan ka samayn, ka hor tago oo lihin agagaarka suuqa kala edit waxoogaa. Gujinaya iyada oo isha ku, waxaad ka heli doontaa fursadaha tafatirka kala duwan si aad u hubiso in filim iyo Filmora waa aalad awood in aad marnaba ogaaday aad lahayd waan ahay.
Download Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) tijaabo oo lacag la'aan ah:
Sida loo Beddelaan QuickTime in wmv